orinasa manao maro loko Flame retardant faribolana sy loop fastener
fanoherana ny lelafo sy fantsom-by: araka ny FAR 25.853 (a)
loko lokona sy fantsona: manaraka ny karatra pantone na mahazatra
farango sy fantsom-by: 100% nylon
fampiharana hook sy loop: ampiharo amin'ny vokatra fiaramanidina
1) Mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra webbing izahay mandritra ny 13 taona.
2) Afaka manome ny habeny sy ny endriny rehetra izahay araka ny takian'ny mpanjifa.
3) Ny vokatra rehetra azonay dia afaka mihaona amin'ny Eoropeana sy Eco-friendly Standard.
4) Mirehareha amin'ny kalitao voalohany amin'ny serivisy miavaka sy ny vidin'ny fifaninanana izahay
Ny lelam-pitana miaro amin'ny lelafo sy ny tadivavarana, ny lelam-pitana miaro amin'ny lelafo ary ny loop dia mifanaraka amin'ny fenitry ny FAR 25.853 (a) sy ny ISO 15025, mihatra amin'ny vokatra fiaramanidina, fitoriana vita amin'ny afo sns.
Misy sakany (mm): 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100,110 herinandro120 izay150 mahery160
Amin'ity fitsapana ity dia misy santionany mitazona amin'ny toerana mijidina amin'ny alàlan'ny fitaovana ao anaty kabinetra ary ny mpandoro Bunsen (lelafo 31,80mm) dia apetraka ao ambaniny mandritra ny fotoana voafaritra (jereo eto ambany). Aorian'izany dia jerena ny santionany.
Miantehitra amin'ny eritreritra stratejika isika, maoderina tsy miova amin'ny sehatra rehetra, fandrosoana ara-teknolojia ary mazava ho azy amin'ireo mpiasa izay mandray anjara mivantana amin'ny fahombiazantsika ho an'ny kalitao tsara indrindra Nylon Nylon Fomba fanoherana Hook sy Loop tape, niezaka izahay hahazo fiaraha-miasa lehibe amin-kitsimpo mpanjifa, mahazo marika vaovao amin'ny indostrian'ny voninahitra miaraka amin'ny mpanjifa sy mpiara-miasa stratejika.
Ny kalitao tsara indrindra amin'ny fanoherana ny lelafo sy ny loop, mba hahatratrarana ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana ho an'ny serivisy tonga lafatra sy varotra tsara kalitao. Raisinay tsara ireo mpanjifa manerantany hitsidika anay, miaraka amin'ny fiaraha-miasa misy lafiny maro, ary miara-mandroso tsena vaovao, mamorona ho avy mamiratra!
Teo aloha: farant retardant hook and loop loop / antiflaming hook and loop tape
Manaraka: Kasety fastener tsy mihidy 100% nylon
hook retardant lelafo sy tadivavarana / antiflaming ...
Fitaovana fiantohana lelafo / fanoherana ny afo ary kasety tadivavarana